Ahoana ny fametrahana mpamily horonan-tsary Nvidia amin'ny Ubuntu 18.04? | Ubunlog
Ahoana ny fametrahana mpamily horonan-tsary Nvidia amin'ny Ubuntu 18.04?
Raha toa ianao ka manana karatra horonan-tsary ao amin'ny solo-sain'izy ireo na na dia manisa aza ny motherboard anao miaraka amina horonan-tsary Nvidia tafiditra, ho fantatr'izy ireo izany te hanana fampisehoana tsara sy kalitao tsara sary Tsy maintsy apetrakao ny mpamily amin'ny karatrao.
Taona vitsy lasa izay, ny fanaovanay ity fizotrany ity dia somary niasa mafy ihany, saingy androany dia manana safidy hafa vitsivitsy isika hahafahana mahazo ireo mpamily ho an'ny horonantsary horonantsary ao amin'ny rafitray nefa tsy misy fahasarotana be.
Ity lahatsoratra ity dia mifantoka indrindra amin'ireo vao manomboka sy vao manomboka ny rafitra.a, satria io matetika no iray amin'ireo lohahevitra izay mikasika anao tamin'ny voalohany rehefa manomboka manamboatra ny rafitrao ianao.
Alohan'ny hanombohana ny fametrahana ireo mpamily amin'ny fomba rehetra zaraiko aminao ilaina ny fahafantarantsika ny maodelin'ny karatra video na chipset ananantsika, ity mba hahafantarana izay hapetrantsika sy hapetraka.
Ka mba hahalala ity fampahalalana kely ity sao tsy fantatrao Tsy maintsy manokatra terminal isika ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
IZA dia hamaly amin'ny fampahalalana ny maodelin'ny karatrayAmin'ity fampahalalana ity dia miroso amin'ny fampidinana ny mpamily izahay.
1 Nametraka ireo mpamily Nvidia avy amin'ny trano fisakafoanana Ubuntu ofisialy
2 Nametraka ireo mpamily Nvidia avy amin'ny PPA
3 Nametraka ireo mpamily Nvidia avy amin'ny tranonkala ofisialy
Nametraka ireo mpamily Nvidia avy amin'ny trano fisakafoanana Ubuntu ofisialy
ankehitriny afaka manatanteraka baiko hafa isika izay hilaza amintsika hoe modely sy mpamily video inona no misy amin'ny alàlan'ny fantsona ofisialy Ubuntu.
Solo tsy maintsy manoratra ao amin'ny terminal isika:
Amin'ny zavatra tokony hiseho zavatra mitovy amin'izany, amiko:
Izay ahazoantsika ny mpamily farany indrindra azontsika apetraka avy amin'ny toeram-pivarotana ofisialy Ubuntu.
Afaka mahazo fametrahana tsotra amin'ny fomba roa isika, ny voalohany dia io rafitra io ihany ve no mikarakara azy, ka ao amin'ny terminal no ampiasantsika:
Raha te-hanondro kinova manokana hita ao amin'ireo trano fitahirizana izahay dia manoratra fotsiny, maka ohatra izay nasehon'ireo fitaovana mpamily ubuntu-komandy ahy
Nametraka ireo mpamily Nvidia avy amin'ny PPA
Fomba iray hafa tsy maintsy ahazoantsika mpamily ho an'ny horonantsary video izany dia amin'ny alàlan'ny fampiasana tahiry fahatelo.
Na dia tsy fantsona ofisialy aza izany, Ity tahiry ity dia manana ny kinova mpamily Nvidia eo noho eo, noho izany mety ho safidy tsara izany raha te hanana ny farany haingana indrindra araka izay tratra.
Hanampiana ny tahiry ao amin'ny rafitray tsy maintsy manoratra ao amin'ny terminal izahay:
Ary raha te hahalala hoe iza no kinova farany indrindra mifanaraka amin'ny chipsetinay, dia manoratra indray izahay:
Aiza no hilazany amintsika hoe kinova inona no tokony hapetraka, izay ataontsika amin'ny:
Aiza no soloinao ny xx amin'ilay kinova asehoko.
Nametraka ireo mpamily Nvidia avy amin'ny tranonkala ofisialy
Finalmente ny safidy farany tsy maintsy apetrantsika ireo mpamily horonantsary Nvidia amin'ny solosaintsika dia amin'ny alàlan'ny fampidinana azy mivantana avy amin'ny tranonkala ofisialin'i Nvidia.
Amin'izay tsy maintsy mandeha amin'ireto rohy manaraka ireto isika ary tsy maintsy mametraka ny angon-drakitra maodelinay karatra sary hanome antsika ny mpamily mifanentana indrindra amin'izao fotoana izao.
Aorian'ny fisintomana, afaka miroso amin'ny fametrahana amin'ny rafitra isika. Noho izany dia tsy maintsy ataontsika esory ny fisie ary esory ny terminal hametraka ny tenantsika eo amin'ilay fampirimana izay nahitana ity baiko nosoratantsika ity sy napetrantsika tamin'ity baiko manaraka ity:
Ny kinova mpamily dia mety miovaova arakaraka ny maodelin'ny karatrao. Mila miandry fotsiny ny fametrahana ianao ary hamerina ny solo-sainanao mba ho voavonjy ireo fanovana.
Ary amin'izany dia ho hitan'izy ireo ny fampiasana Nvdia amin'ny rafitra misy azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » sary » Ahoana ny fametrahana mpamily horonan-tsary Nvidia amin'ny Ubuntu 18.04?
Marco Tulio VS dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, newbie Linux aho; Ankasitrahako ny fizaranao ny fahalalanao; fa rehefa manoratra amin'ny terminal: fitaovana Ubuntu-mpamily; tsy misy miseho amiko. Hankasitraka ny hevitra na fanampiana aho. Manana xubuntu 18.04, 32 bit ary karatra NVIDIA Corporation C61 [GeForce 6100 nForce 405] (rev a2).
Valiny tamin'i Marco Tulio VS
Luis Miguel dia hoy izy:
David, tsara tolak'andro ary avelao aho handefa bitsika anao.
Nanana olana tamin'ny UBUNTU 18.04.1 aho, nefa tsy nahavita namaha izany hatramin'izao. Ny fanontaniana dia ny nametrahako UBUNTU niaraka tamin'ny Windows 10 ary ny boot roa dia niseho ara-dalàna, saingy rehefa nanandrana nanangana Ubuntu aho taorian'ny nangatahako ny tenimiafiko dia hiantona ny solosaina. Saingy tantara ity, satria misaotra anao dia voavaha izy ary miasa toy ny hatsarana ho ahy.
Tao amin'ny terminal no napetrako: fitaovana mpamily ubuntu
Ary taorian'izay dia nahazo ireto fampahalalana manaraka ireto aho:
mpivarotra: NVIDIA Corporation
modely: GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile]
mpamily: nvidia-driver-390 - distro tsy atolotra ankolaka
mpamily: xserver-xorg-video-nouveau - distro maimaim-poana builtin
Nanaraka ny torolalanao aho napetrako tao amin'ny terminal:
sudo ubuntu-mpamily mampiditra auto.
Ary rehefa afaka segondra vitsy dia raikitra ny zava-drehetra.
Misaotra anao arivo sy arivo indray alina.
Valiny tamin'i Luis Miguel
Jonathan Suarez dia hoy izy:
Inona koa ny namana tsy azoko apetraka ny drive na vlc amin'ny sarimihetsika alefako amin'ny solo-saina hafa fa tsy mandeha izany ataoko amin'ny pc hafa fa tsy mendrika ny fomba anaovako azy.
Mamaly an'i jonathan suárez
aon dia hoy izy:
Tutorial tsara, misaotra.
Mamaly an'i Aon
Juandejo dia hoy izy:
Ny mpamily nvidia 390 tompony .. dia tsy mamela hiditra ao amin'ny OS ary tsy afaka miditra ao amin'ny ubuntu 19.10 ianao. Nanome olana foana izy io fa izao vao mainka lehibe kokoa aza, manamboatra loop tsy ahafahanao mivoaka afa-tsy amin'ny console. Hainao ve ny mamaha azy? Ubuntu 19.10 64-Operating System.
Valiny tamin'i Juandejo
David naranjo dia hoy izy:
Salama maraina. Ny fametrahana mpamily toy ny nataonao, PPA, dia nakarinao ny azo ampiharina avy amin'ny tranokala Nvidia na avy amin'ny safidy mpamily fanampiny.
Ilay loopy noresahinao ve dia ilay «Blackscreen» malaza, izany hoe ny «écran» mainty?
Mampiasa ilay kinova "390.129" mitovy aho ary eo amin'ny 19.10 aho, ka hialako fa olana amin'ny rafitra io.
Valiny tamin'i David Naranjo
Charles David dia hoy izy:
Salama, amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka mametaka mpamily sudo ubuntu-driver aho rehefa avy mihazakazaka "fitaovana mpamily ubuntu", ary apetraka ny mpamily. Manana karatra horonantsary GeForce RTX 2070 aho, mieritreritra ve ianao fa mandeha?
Valiny tamin'i Carlos David
John J Garcia O dia hoy izy:
Rehefa mametraka ny mpamily i Nvidia dia tsy mamela ahy hadisoana maromaro izay azo aseho amin'ny pikantsary. Inona ny pc miseho miasa ao amin'ny X ary tokony hivoaka hametraka Nvidia Driver aho ary tsy afaka nivoaka X dia tsy manana ny dingana hanaovana izany amin'ny Ubuntu 18.04 LTS
Valiny tamin'i John J Garcia O
Jose Feliksa dia hoy izy:
milamina, fa misy fonosana takiana sasany mbola tsy noforonina na
Noraisin'izy ireo ny "Miditra."
nvidia-304: Miankina: xorg-video-abi-11 fa tsy azo apetraka na
xorg-video-abi-12 fa tsy azo apetraka na
xorg-video-abi-13 fa tsy azo apetraka na
xorg-video-abi-14 fa tsy azo apetraka na
xorg-video-abi-15 fa tsy azo apetraka na
xorg-video-abi-18 fa tsy azo apetraka na
xorg-video-abi-19 fa tsy azo apetraka na
xorg-video-abi-20 fa tsy azo apetraka na
Mamaly an'i Josefa Feliksa
Nametraka tao amin'ny PC Windows 7 Windows 10 sy Linux Ubuntu 20.04 aho, nila nametraka karatra horonantsary NVIDIA GeForce 7100 GS. Na amin'ny Windows 7 na Windows 10 dia afaka nanavao ireo mpamily tsy nisy olana aho, fa rehefa miditra amin'ny Linux aho dia mahazo dian-kapoka hatrany ambony ka hatrany ambany ary TSY HITANAO INDRINDRA, tsy afaka manao n'inona n'inona. AHOANA NO ATAO AMIN'IZAO ASA ITY?
Mx dia hoy izy:
Misaotra betsaka fa nanampy be! Misaotra anao amin'ny asa tsara vitanao! Fitahiana maro!
Mamaly an'i Mx
Sandy Alvarez Pardo dia hoy izy:
Salama te-hametraka fanontaniana kely aho, manana laptop, HP, Core i510 miaraka amina carte graphique Nvidia GTX 1050. Hita fa mametraka Linux aho, izay variana Debian na Ubuntu ary rehefa apetrako ireo mpamily Nvidia dia mitranga izany Ny efijery tafiditra dia tavela tsy misy famantarana, ny seranan-tsambo HDMI ihany no miasa. Izay hevitra hanamboarana azy. Miarahaba.
Valiny tamin'i Sandy Alvarez Pardo
NOMNN dia hoy izy:
TSY MISY MLDTS MIASA
Valio ny NOMNN
Mpanjifa Git misy sary 3 an'ny Ubuntu 18.04